မိခင်က မီးတွင်းထဲမှာ ဆုံးသွားတာကြောင့် မိဘမဲ့ဖြစ်သွားရဲ့ ကလေးသုံးယောက်ကို ခေါ်ယူမွေးစားပေးမယ့် ခိုင်နှင်းဝေ – Maythadin
မိခင်က မီးတွင်းထဲမှာ ဆုံးသွားတာကြောင့် မိဘမဲ့ဖြစ်သွားရဲ့ ကလေးသုံးယောက်ကို ခေါ်ယူမွေးစားပေးမယ့် ခိုင်နှင်းဝေ
May Thadin | August 13, 2021 | Celebrity | No Comments
ခိုင်နှင်းဝေကတော့ မိဘမဲ့နေတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေကို တရားဝင် ခေါ်ယူ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ ပရဟိတ မင်းသမီးကြီး တစ်ယောက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ ဆိုရင် သူမက လူမှုကူညီရေး ပရဟိတတွေကိုလည်း အစွမ်းကုန် လုပ်ကိုင်နေသလို မိဘမဲ့ ကလေးလေးတွေ အတွက်လည်း မိခင်အရင်းသဖွယ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အပြည့်နဲ့ နွေးထွေးစွာ စောင့်ရှောက်မှုတွေ ပေးနေခဲ့ပါတယ်။
အခုလည်း မကြာခင်နာရီပိုင်းလောက်က လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာထက်မှာ မိဘမဲ့သွားလို့ အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ ကလေးငယ်လေး သုံးယောက်ရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းလေးတွေ့ရပါတယ် ။
မိခင်ဖြစ်သူက ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်း မီးတွင်းထဲ ကွယ်လွန်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီသတင်းကို သိသိချင်း ခိုင်နှင်းဝေက ဒီကလေးလေးသုံးယောက်ကို ခေါ်ယူမွေးစားဖို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ရေးသားဖော်ပြလာပါတယ် ။
” ကျမကို စာတွေ အများကြီး ပို့ပြီး အကူအညီတောင်းကြတဲ့ အတွက် ကျန်ရစ်သူ ကလေး (၃)ယောက်ကို ခေါ်ယူမွေးစားဘို့ ဆက်သွယ်ထားပါတယ်….
လောလောဆယ် ဦးလေး အရင်းမှ ခေါ်ယူ စောင့်ရှောက်ထားကာ အကြောင်းပြန်မဲ့ အကြောင်း ပြောပါတယ်ရှင်..ကျမဆီသို့ မွေးစားခွင့် ပေးပါက တာဝန်ယူ စောင့်ရှောက်သွားပါမယ်..
လောလောဆယ် အုပ်ထိန်းသူ ဦးလေး ရှိသည့် အတွက် အရမ်း စိတ်မပူကြပဲ ကလေးတွေ အုပ်ထိန်းသူ နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ အကြောင်း ဒီကနေပဲ အားလုံးကို အသိပေးပါတယ်ရှင်.” ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးဖြစ်ရာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လညဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။
Photo Khine Hnin Wai
ခိုင္ႏွင္းေဝကေတာ့ မိဘမဲ့ေနတဲ့ ကေလးငယ္ေလးေတြကို တရားဝင္ ေခၚယူ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတဲ့ ပရဟိတ မင္းသမီးႀကီး တစ္ေယာက္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
အခုအခ်ိန္မွာ ဆိုရင္ သူမက လူမႈကူညီေရး ပရဟိတေတြကိုလည္း အစြမ္းကုန္ လုပ္ကိုင္ေနသလို မိဘမဲ့ ကေလးေလးေတြ အတြက္လည္း မိခင္အရင္းသဖြယ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အျပည့္နဲ႕ ေႏြးေထြးစြာ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေပးေနခဲ့ပါတယ္။
အခုလည္း မၾကာခင္နာရီပိုင္းေလာက္က လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာထက္မွာ မိဘမဲ့သြားလို႔ အကူအညီလိုအပ္ေနတဲ့ ကေလးငယ္ေလး သုံးေယာက္ရဲ႕ စိတ္မေကာင္းစရာ သတင္းေလးေတြ႕ရပါတယ္ ။
မိခင္ျဖစ္သူက ကေလးေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း မီးတြင္းထဲ ကြယ္လြန္သြားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီသတင္းကို သိသိခ်င္း ခိုင္ႏွင္းေဝက ဒီကေလးေလးသုံးေယာက္ကို ေခၚယူေမြးစားဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္လို႔ ေရးသားေဖာ္ျပလာပါတယ္ ။
” က်မကို စာေတြ အမ်ားႀကီး ပို႔ၿပီး အကူအညီေတာင္းၾကတဲ့ အတြက္ က်န္ရစ္သူ ကေလး (၃)ေယာက္ကို ေခၚယူေမြးစားဘို႔ ဆက္သြယ္ထားပါတယ္….
ေလာေလာဆယ္ ဦးေလး အရင္းမွ ေခၚယူ ေစာင့္ေရွာက္ထားကာ အေၾကာင္းျပန္မဲ့ အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ရွင္..က်မဆီသို႔ ေမြးစားခြင့္ ေပးပါက တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္သြားပါမယ္..
ေလာေလာဆယ္ အုပ္ထိန္းသူ ဦးေလး ရွိသည့္ အတြက္ အရမ္း စိတ္မပူၾကပဲ ကေလးေတြ အုပ္ထိန္းသူ နဲ႕ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ အေၾကာင္း ဒီကေနပဲ အားလုံးကို အသိေပးပါတယ္ရွင္.” ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေလးျဖစ္ရာ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ျပန္လညေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ ။
Makeup Artist ခိုင်ခိုင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်မှုကြောင့် ကွယ်လွန်
ပရိတ်သတ်အချစ်​တော် ​ပိုင်တံခွန်က ပရိတ်သတ်များထံသို့ က​ဗျာ​လေး တပုဒ် ​ရေးသား​ပေးပို့။
မြန်မာပြည်က လူတွေအားမပေးလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး ထိုင်းကလူတွေရှိတယ်ဆိုပြီး Status တင်မိတဲ့အပေါ်မှာ မှားမိပါတယ်လို့ တောင်းပန်လာတဲ့ ဆယ်လီ နေဆန်း…………